နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ၃၀၉၆ ရက်
၁၉၉၈ ရဲ့ တစ်ခုသော ညနေခင်း။
နာတာရှာ ကမ်ပွတ်ရှ် သည် ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းဆင်းတော့ အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်လာသည်။ သူမ ကျောင်းနှင့် အိမ်က သိပ်မဝေး။ နှစ်လမ်းကျော်လောက် လျှောက်လိုက်လျှင် ရောက်ပြီဖြစ်သည်။ ကမ်ပွတ်ရှ် အသက်က ၁၀ နှစ်ပဲ ရှိသေးသည်။ သို့သော် သူမက အသက်အရွယ်ထက် ပိုထွားသူမို့ လှသွေးကြွယ်စ ပြုနေလေပြီ။ သို့သော် သူမ စိတ်ကတော့ ကလေးစိတ် သက်သက်ပါ။ သူမက လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပေါ်မှာ တွေ့သော ကျောက်ခဲလေးများကို ကန်ရင်း ဆော့ကစားနေသည်။ အရင်နေ့တွေကတော့ သူမ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း အတူပါနေကြဖြစ်သည်။ ယနေ့တော့ သူက ဖျားနေသဖြင့် ကျောင်းမလာနိုင်သောကြောင့် သူမ တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ်ပွတ်ရ်ှသည် အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် မာမီက ဘာစားစရာ လုပ်ထားမလဲ ဆိုတာ တွေးနေသည်။ သူမ ဆာနေပြီ။ မာမီက သူမကို အစားပုတ်ကလေး ဟု အမြဲတမ်း စတတ်သည်။ ဒီနေ့အဖို့ အိမ်ပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူး ဆိုသည်ကိုတော့ ကမ်ပူး ဘယ်လိုမှ ကြိုမမြင်နိုင်ပါ။ အစားအကြောင်းပြီးတော့ ဆရာမ ပေးလိုက်သော အိမ်စာတွေ တွေးမိသွားသည်။ ဒီနေ့ အိမ်စာကတော့ နည်းနည်းများ ခက်မလား မသိပါ။ သူမက သင်္ချာကို သိပ်မလိုက်နိုင်။ ဥာဏ်စမ်းတွေ ဆို ပိုဆိုးသည်။ ဂျွန့်ဆီက အနည်းနှင့် အများတော့ ကြည့်ရတတ်သည်။ သူတို့ အိမ်နှင့် သူမတို့ အိမ်က သုံးအိမ်သာ ခြားသည်။ ခုတော့ သူက ဖျားနေသဖြင့် သူမကို သင်္ချာ ကူတွက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
နောက်ဘက်မှ ကားသံကြားသဖြင့် ကမ်ပွတ်ရ်ှက ဘေးဘက်သို့ ပိုကပ်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် ကားက သူမကို ကျော်မသွား။ ဗင်ကား အဖြူရောင်တစ်စီးက သူမဘေးသို့ ရပ်လာသည်။ သူမက အံသြပြီး ကြည့်လိုက်သော အချိန်မှာပဲ သူမ ခါးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆွဲယူပွေ့ပြီး ကားပေါ်တင်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသည်။ သူမ အတွက် အော်ချိန်ပင် မရလိုက်ပါ။ အဖြူရောင် အဝတ်စက သူမ ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာပြီး ပိတ်ထားသည်။ လက်နှစ်ဘက်ကိုလည်း ပလတ်စတစ် ကြိုးနှင့် ချည်လိုက်သည်ကို သိလိုက်သည်။ သူမ ဘယ်လိုမှ မလှုပ်နိုင်တော့ပါ။ သူ့ကားပေါ်တွင် ပါသွားရသည်။ ထို့နောက် သူမကို မြေအောက်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ပိတ်ထားခြင်း ခံရသည်။
“မှတ်ထား၊ ငါ့နာမည် ပရစ်လိုပေးလ် တဲ့၊ မင်း ဒီမှာပဲ နေရတော့မယ် နားလည်လား”
သူကပြောသည်။ ထိုလူသည် အသက် ၃၀ ကျော်လောက်ရှိမည်။ သူမကို စူးစူးရှရှ ကြည့်နေသော သူ့မျက်လုံးများမှာ မူမမှန်ပဲ ဘလာသက်သက် ဖြစ်နေပုံနှင့်။ သူ့ကို ကြည့်ရသည်မှာ အရာရာ ပျောက်ဆုံးပြီး အားငယ်နေသူ ပုံစံမျိုး။
သူက သူမကို ဘာမှတော့ မလုပ်သေး။ အစားအသောက်ကိုလည်း ပုံမှန်ကျွေးထားသည်။ သတ်တော့မည့် ဝက်ကို ကျွေးထားသလိုမျိုး ကျွေးနေသည်ဟု သူမက ထင်သည်။ အစားအသောက် လာကျွေးတိုင်းမှာ သူက သူမကို ပွတ်သီး ပွတ်သတ် လာလုပ်လေ့ ရှိသည်။ ကမ်ပွတ်ရှ် အတွက် တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသော အရာ ဖြစ်သဖြင့် ကြောက်၍ တုန်နေသည်။ နောက်ထပ် ဒီထက် ဆိုးသော အရာများ လာတော့မည်ကိုလည်း ကလေးသာသာမို့ မမျှော်မှန်းမိပါ။ မြေတိုက်ထဲမှ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစား ကြည့်သော်လည်း လုံးဝ ထွက်ပေါက်မရှိပါ။ သူဝင်လာပြီး ပြန်လျှင် အပြင်မှ သော့ခတ်သွားသော အပေါက် တစ်ခုသာ ရှိသည်။
မာမီ နှင့် ဒက်ဒီကို တပြီး ကမ်ပွတ်ရှ် ငိုမိသည်။ ငိုရလွန်းသဖြင့် မျက်ရည်တွေတောင် ခမ်းသွားတော့မလား ဟု ထင်ရသည်။ သို့ပေမယ့် ဘာမှ ဖြစ်မလာပါ။ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့သာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ကမ်ပွတ်ရ်ှကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူ တစ်ယောက်မှ ရောက်မလာခဲ့ပါ။
သူမ အသက် ၁၄ နှစ်ရောက်တော့ သူက သူမကို မြေတိုက်ခန်းထဲ အမြဲမထားတော့ပဲ သူ့အိပ်ယာထဲသို့ ခေါ်ထားသည်။ ကမ်ပွတ်ရှ် အတွက် ငရဲနေ့များပင် ဖြစ်သည်။ ကမ်ပွတ်ရ်ှသည် သူ့အိပ်ရာပေါ်တွင် ထိတ်လန့် ချောက်ချားစွာနှင့် တောင့်တောင့်ကြီး လှဲနေရသည်။ သူမဘေးမှာ သူလှဲနေပြီး သူမ၏ လက်ကောက်ဝတ်နှင့် သူ့လက်ကောက်ဝတ်ကို ပလတ်စတစ်ကြိုးနှင့် ပူးချည်ထားသည်။ သူမကို အသံတစ်ချက်မှပင် ထွက်ခွင့် မပြုပါ။ အော်ညည်းမိလျှင်.. သူလုပ်ခိုင်းသည်ကို ငြင်းဆန်လျှင် သူမကို ရိုက်နှက်တတ်သဖြင့် ကမ်ပွတ်ရ်ှမှာ အသံမထွက်ရဲပဲ သူခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးရမြဲ ဖြစ်သည်။ သူသည် သူ စိတ်မကျေနပ်တိုင်း သူမကို ရိုက်နှက်လေ့ရှိရာ တစ်ပတ်လျှင် အကြိမ် ၂၀၀ လောက် အရိုက်ခံခဲ့ရသည်။
သူက လိင်ကိစ္စထက် သူမကို ပွတ်သပ်ရသည်ကိုပင် သာယာနေတတ်သူ ဖြစ်သည်။ ကမ်ပွတ်ရ်ှသည် များသော အားဖြင့် သူ့အိပ်ရာပေါ်တွင် ဝတ်လစ်စလစ် လဲလျောင်းနေရလေ့ ရှိသည်။ သူအလုပ်သွားသည့် အခါမှာတော့ သူမကို မြေတိုက်ခန်းထဲမှာပင် သော့ခတ်ထားခဲ့လေ့ရှိသည်။ ကမ်ပွတ်ရ်ှသည် သူမကိုယ်သူမ စက်ဆုပ်လာသည်။ သူမ အတွက် လွတ်လမ်း မရှိတော့ဟု ထင်လာသည်။ ထိုလူနှင့်ပင် တစ်သက်လုံးနေရတော့မလား ဟု သူမကိုယ်သူမ ပြန်မေးမိသည်။ ဘုရားသခင်ကို တိုင်တည်ပြီး ဆုတောင်းမိသော အကြိမ်ပေါင်းလည်း မရေနိုင်တော့ပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကလည်း သူမကို ခုထိမမြင်သေး။ သူမကို ဒုက္ခတွင်းထဲမှာ ဘယ်အထိ ဆက်ထားမှာလဲ။ သူမ ဆက်သည်းမခံနိုင်တော့ပါ။
သူမကို ရေတိုက်ထားခဲ့သော ခွက်က ဖန်ခွက်ဖြစ်နေသော တစ်နေ့မှာတော့ သူမက ထိုဖန်ခွက်ကို ခွဲ၍ လက်ကောက်ဝတ်ကို လှီးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည်။ သို့သော် သူက အလုပ်က စောစောပြန်လာပြီး အချိန်မီ တွေ့သွားသဖြင့် များများစားစား သွေးထွက်ခွင့်ပင် မရလိုက်ပါ။ နောက်ထပ်လည်း အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ လုပ်ခဲ့သေးသော်လည်း အကြိမ်တိုင်းမှာ သူက လက်ဦးသွားသဖြင့် ကမ်ပွတ်ရှ် မှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
ပရစ်လိုပေးလ်သည် ကမ်ပွတ်ရှ်၏ ဆံပင်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အတော်ပင် ဇီဇာကြောင်သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် သူမ၏ ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင် တစ်ပင်မှ ရှိနေသည်ကို မကြိုက်ပါ။ သူမကို ခေါင်းတုံးတုံးပေးထားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကမ်ပွတ်ရ်ှသည် သူ့ကို ဘာတစ်ခုမှ အတိုက်အခံမလုပ်တော့ပဲ နေလိုက်သည်။ သူမ၏ သေခြင်း ရှင်ခြင်းကိုလည်း အလေးမထားတော့။ စိတ်ထဲမှာ ဗလာသက်သက်သာ ထားလိုက်သည်။ သူခိုင်းသမျှ မငြင်းမဆန်လုပ်ခြင်း အားဖြင့် အသားအနာလည်း သက်သာမည် မဟုတ်လား။ သူမ ဘဝက မျှော်လင့်ချက် ဆုံးနေပြီ ဖြစ်သော ဘဝ။ အားလုံး ဗလာသက်သက်။
သူမ အသက် ၁၆ နှစ်မှာတော့ သူမကို ကျွေးနေသော အစားအသောက်များကို လျှော့ချလိုက်သည်။ အရွယ်ရောက်သူ တစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်သည်ထက် လေးပုံတစ်ပုံလောက်သာ ကျွေးတော့သည်။ သူမ၏ ကိုယ်အလေးချိန် တော်တော်လျော့သွားသည်။ အစာအိမ်ရောဂါပါ စွဲကပ်ပြီး တစ်ချိန်လုံး နာကျင်နေသည်။ ပရစ်လိုပေးလ်ကလည်း သူမကိုယ်သူမ မည်သူမည်ဝါမှန်း မသိတော့လောက်အောင် ဖြစ်ကာ နာမည်အသစ် တစ်ခုနှင့် နေသွားဖို့ တစ်ချိန်လုံး ဖိအားပေးနေသည်။
နာကျင်မှုက ကြီးစိုးနေသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ကိုတောင်မှ မလုပ်ဆောင်ပါ။ သူမက သေခြင်းကို တောင့်တနေပါသည်။ နာကျင်မှုကို ကြာရှည်မခံစားလိုပါ။ ထာဝရဘုရားသခင်က သူမကို ခေါ်ဆောင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေပါသည်။ သူမမှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နာကျင်မှုက ခံစားနိုင်သည်ထက် အစများစွာ ကျော်လွန်နေခဲ့ပါပြီ။
သူမ စိတ်လျော့လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပရစ်လိုပေးလ်က သိသည်။ သူ့ကို ဘာမှ မဆန့်ကျင်၊ ခိုင်သမျှ လိုက်လုပ်ပြီး၊ အရင်လိုလည်း တအီအီ ငိုမနေတော့သဖြင့် သူ့ဘက်က နည်းနည်း လျှော့လာသည်။ သူမကို အစားလျော့ကျွေးထားသဖြင့် ထွက်မပြေးနိုင်လောက်အောင် အားနည်းနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ သူမကို အရင်လို အမြဲတမ်း ကြိုးချည်မထားတော့။ အိပ်ခန်းထဲမှာ ဟိုဟို သည်သည် လွတ်လွတ်လပ် သွားခွင့်ပေးလာသည်။ သို့သော် သူ့မျက်စိအောက်မှာပင် ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တော့ သူက အခန်းထဲမှာ ဖုန်စုပ်စက်နှင့် ဖုန်ရှင်းဖို့ ပြောလာသည်။ ကမ်ပွတ်ရ်ှလည်း ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရင်း သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူက အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် သတင်းစာ ဖတ်နေသည်။ သူမက ဖုန်စက်ကို တွန်းရင်း မီးဖိုဆောင် လမ်းကြားထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။ ထိုမီးဖိုဆောင်တွင် နောက်ဘက်သို့ ထွက်သော တံခါးတစ်ခု ရှိသည်ကို သူမ သိသည်။ သူက ဖုန်စုပ်သံကို နားစွင့်နေမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူမသိသည်။ သူမက သူ့မျက်ကွယ်ရာ ရောက်သည်နှင့် ဖုန်စုပ်စက်ကို ဒီအတိုင်းဖွင့်ထားပြီး နောက်ပေါက်မှ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ဖုန်စုပ်စက်ကတော့ သူ့ဟာသူ အသံမြည်နေဆဲ။
ကမ်ပွတ်ရ်ှသည် အနီးရှိ အိမ်တစ်အိမ်သို့ သွား၍ လူခေါ်ဘဲလ်ကို သွားတီးသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ။ တံခါးပွင့်လာပြီး အိမ်ရှင်များက သူမကို အံသြစွာ ကြည့်ကြသည်။ ထို့နောက် ကမ်ပွတ်ရ်ှတစ်ယောက် ၈နှစ်ကြာ ဝေးကွာခဲ့ရသော မိဘများ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သွားသည်။ သူမ ထွက်ပြေးသွားမှန်း သိတော့ ပရစ်လလိုပေးလ်လည်း သူ့အိမ်မှ ထွက်ပြေးသွားသည်။ ရဲများ ရောက်လာသောအခါကို သူ့ကို အိမ်မှာ မတွေ့ရတော့ပါ။
ဝုဖ်ဂန် ပရစ်လိုပေးလ်၊ ၄၄ နှစ် သည် ရဲများလက်မှ ထွက်ပြေးရင်း ရထားရှေ့သို့ ခုန်ချ၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားကြောင်း သိရသည်။
Sep 7. 2010, The Indian Express တွင် ဖတ်လိုက်ရသော ဆောင်းပါးတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်၍ ဝတ္တုအနေနှင့် ဖြည့်စွက် ရေးသားပါသည်။ ယခုအခါ အသက် ၂၂နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သော Austrian မိန်းကလေး Kampush သည် သူမ၏ ၈နှစ်ကြာ အတွေ့အကြုံကို 3096 Days အမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
P.S နာတားရှားက အဲ့နေ့ကရော နောက်ပိုင်းရော ခုရော သူ့မိဘ အိမ်ကို မပြန်ဘူး။ အစက ရဲစခန်း၊ ဆေးပညာရှင်တွေ ရှေ့နေတွေနဲ့ လူမူ့ဌာနက စောင့်ရှောက်ထားပြီးခုတော့ တယောက်တည်း နေတယ်။ လို့ မအယ်က ပြောထားပါတယ်..။
လောကကြီးမှာ သာမန်မဟုတ်ဘဲ ဖောက်လွဲဖာက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရရင် နည်းနည်းမှ စိတ်မချမ်းသာဘူး
သူတို့အတွက် တန်ဆာခံဖြစ်ပေးရတဲ့လူတွေကို သနားမိတယ်
အထူးသဖြင့် ဒီဇာတ်လမ်းထဲက မိန်းမငယ်လေးဘ၀က ရင်နာဖို့ ကောင်းလွန်းတယ်..
ညီမရေ နာတားရှား ပြန်ပေးဆွဲခံရတာ ၁၉၉၈ မှာပါ။ ၂၀၀၆ မှာ သူအိမ်နီးချင်း အိမ်ကို ထွက်ပြေးသွားတော့ အိမ်နီးချင်းက ရဲကို ဖုန်းဆက် ပေးလိုက်တာ။
နာတားရှားက အဲ့နေ့ကရော နောက်ပိုင်းရော ခုရော သူ့မိဘ အိမ်ကို မပြန်ဘူး ညီမရေ။အစက ရဲစခန်း၊ ဆေးပညာရှင်တွေ ရှေ့နေတွေနဲ့ လူမူ့ဌာနက စောင့်ရှောက်ထားပြီးခုတော့ တယောက်တည်း နေတယ် ညီမရေ ။
ရင်နင့်စရာ ဇာတ်လမ်းလေး လာဖတ်ပါတယ်
မသိင်္ဂါရေ ဇာတ်လမ်းလေး က ကောင်းပါတယ် စိတ်မကောင်း စရာပါ
သတင်းထဲမှာတော့ ဘယ်ကို ပြန်လဲလို့ မပါတာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မိဘအိမ် ပြန်ပို့လိုက်တာ.. ကိုယ်တို့ မြန်မာတွေလို အောက်မေ့လို့ပေါ့နော်..
မအယ် ပြောတာ ကြားရတော့ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းစရာပါ..
ဆိုင်မှာကွန်နယ်သေက ဘုရားရှိခိုးပြီးမှလာသုံးရဲတယ်း)
အခုတော့လည်း ဝတ္ထုသဘောလေးနဲ့ ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။
၈ နှစ်တာကာလဆိုတာလည်း ..
အရူးတွေကြောင့် ကြားထဲက ဓါးစာခံဖြစ်ရတဲ့ ကလေးမလေး သနားပါတယ်ဗျာ.
အဲလို အဖြစ်ပျက်မျိုး ကြုံဖူးတဲ့ သူတွေတော့ တကယ့် ငရဲပြီရောက်သွားသလိုပဲ နေမှာ..။
သနားလိုက်တာ ဆိုတဲ့စကားကလွဲလို့ ဘာများ ပြောနိုင်ဦးမလဲ အော် သူမလဲ ဝဋ်ကြွေးပဲပေါ့
ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းပေါ့ သူမ ကတော့ ဝဋ်ကြွေးဆပ်လိုက်တာပဲပေါ့
ဟူးးးးးးးးးး သက်ပြင်းရှည်ကြီး တခု ချသွားတယ် မ ရေ..........
တော်သေးတာပေါ့။ လွတ်မြောက်ခဲ့လို့။ မလွတ်မြောက်ဘဲ အဲဒီလို ဒုက္ခခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမလဲ မသိဘူး။
သတင်းအဖြစ်တော့ဖတ်ဘူးတယ်၊ ခုလိုအသေးစိတ်မဖတ်ဘူးပါ၊ ယခုစိတ်ဓါတ်ခိုင်မာနေတာ အံ့သြလောက်ပါတယ်
ဟင်း...မန့်လိုက်ရတာ ၃ ၊ ၄ ၊ ပဲ..